Injineernimada - Geofumadas
Sebtember 7,8, 9 iyo XNUMX ee sanadkan, "UAV Expo Americas" waxaa lagu qaban doonaa Las Vegas Nevada - USA. Waa bandhigii ganacsiga hormuudka u ahaa Waqooyiga Ameerika iyo shirkii diiradda saarey isdhexgalka ganacsiga UAS iyo hawlgallada lala yeesho soo bandhigayaal ka badan dhacdooyinka kale ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Wuxuu daboolayaa mawduucyada ...
GPS / Qalabka, Engineering, tabo cusub
Wareysiga Carlos Quintanilla - QGIS
Waxaan lahadalnay Carlos Quintanilla, madaxweynaha hada ee Ururka QGIS, kaasoo nasiiyay noociisa ku saabsan kororka baahida loo qabo xirfadaha laxiriira cilmiga dhirta, iyo sidoo kale waxa lagafilayo mustaqbalka. Maaha wax qarsoodi ah in hoggaamiyeyaal badan oo tikniyoolajiyadeed dhinacyo badan -dhismeed, injineernimo, iyo kuwo kale-, “the…
Engineering, tabo cusub, qgis
Leica Geosystems waxay ku daraysaa xirmo cusub oo ah baaritaanka laser 3D
Leica BLK360 Scanner Xirmada cusub waxay ka kooban tahay Leica BLK360 aaladda sawir qaadista, Leica Cyclone REGISTER 360 software desktop ah (BLK Edition) iyo Leica Cyclone FIELD 360 oo loogu talagalay kiniiniyada iyo taleefannada. Macaamiisha ayaa si toos ah ugu bilaabi kara isku xirnaansho la'aan iyo qulqulka shaqada ee alaabooyinka qabashada dhabta ah ...
Ku darista cusub ee taxanaha Machadka Bentley: Daabacaadda Gudaha MicroStation CONNECT Edition
Machadka EBentley Institute Press, oo ah daabacaha buugaagta buugaagta iyo shaqooyinka tixraaca xirfadeed ee horumarinta injineernimada, dhismaha, dhismaha, howlaha, juqraafiga iyo bulshada waxbarashada, ayaa ku dhawaaqay helitaanka taxane cusub oo daabacan oo cinwaankeedu yahay "Gudaha MicroStation CONN Edition ", oo hadda lagu heli karo daabacaadda halkan iyo buug elektaroonig ah ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Wareysiga Geofumadas ee Singapore oo lala yeeshay Eric Chong, Madaxweynaha iyo agaasimaha guud, Siemens Ltd. Sidee Siemens ugu fududeyneysaa adduunka inuu yeesho magaalooyin caqli badan? Maxay yihiin waxyaalaha aad bixiso ee ugu sarreeya ee tan awood u siinaya? Magaalooyinku waxay la kulmaan caqabado sababo la xiriira isbeddelada ay keeneen megatrends-ka magaalaynta, isbeddelka cimilada, caalamiyeynta iyo dadka. Dhamaan kakanaantooda, waxay abuuraan ...
Wararka Geo-Engineering - Sannad Kaabayaasha - YII2019
Toddobaadkan, Shirka Kaabayaasha Sannadka ee Sanadka - YII 2019 waxaa lagu qabtaa Singapore, kaas oo mawduuciisa ugu weyni diiradda saarayo u dhaqaaqista dhinaca dijitaalka iyada oo loo marayo hab mataano dijitaal ah. Munaasabadda waxaa dhiirrigeliya Bentley Systems iyo istiraatiijiyad istiraatiiji ah Microsoft, Topcon, Atos iyo Siemens; in isbahaysi xiiso leh halkii ...
Engineering, tabo cusub, Microstation-Bentley
Dib-u-qeexida fikradda Geo-Injineer
Waxaan ku noolnahay daqiiqad gaar ah isku-xirnaanta edbinta ee sannado badan loo kala qaybsanaa. Baadhitaan, Naqshad dhisme, sawir xariiq, qaabdhismeed dhismeed, qorsheyn, dhisme, suuqgeyn. Inaan tusaale ka soo bixiyo wixii dhaqan ahaan u socon jiray; toosan loogu talagalay mashaariicda fudud, jaan-goynta oo ay adag tahay in la xakameeyo iyadoo kuxiran cabirka mashaariicda. Maanta, si la yaab leh ...
Waxay ku taal meesha ugu muhiimsan ee Sarabhai, K10 Grand waa dhisme xafiis hormood ah oo dejinaya heerar cusub oo loogu talagalay booska ganacsiga ee Vadodara, Gujarat, India. Aaggu wuxuu arkay koritaan xawli ah oo dhismayaal ganacsi sababo la xiriira u dhawaanshaha garoonka diyaaradaha iyo xarunta tareenka. K10 waxay shaqaaleysiisay la taliyayaasha VYOM sida ...
Geofumadas wuxuu kaqeybqaatay mid kamid ah dhacdooyinka caalamiga ah ee ugu muhiimsan ee laxiriira BIM (Dhismaha Macluumaadka Dhismaha), waxay ahayd shirkii yurub BIM Summit 2019, oo lagu qabtay AXA Auditorium ee magaalada Barcelona-Spain. Dhacdadan waxaa kahoreeyay Khibrad BIM, halkaas oo ay suurtagal ka ahayd in aragti laga yeesho waxa imaan doona maalmaha ...